Shirka midowga musharaxiinta oo wajigiisa labaad galay iyo wararkii u dambeeyey – Soomaali 24 Media Network
Posted on November 22, 2020 Leave a Comment on Shirka midowga musharaxiinta oo wajigiisa labaad galay iyo wararkii u dambeeyey
Waxaa maanta wajigiisa labaad gelaya shirka wada-tashiga ee midowga musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Soomaaliya, kaas oo shalay ka furmay magaalada Muqdisho.
Inta badan shirkaan ayaa diiradda lagu saarayaa arrimaha doorashooyinka iyo dib ugu laabashada hanaanka loo maray guddiyada ay dowladdu u magacowday in ay maamulaan doorashada.
Musharaxiintan ayaa gadoodka ugu badan ka qaba in guddiyada magacaaban ay maamulaan doorashada dalka, iyagoo aaminsan in aysan doorashadu noqonayn mid xor ah iyo xalaal ah, maadaama sida ay sheegeen xubnaha guddiyadaas ay yihiin kuwo laga soo kala xushay NISA iyo shaqaalaha dowladda.
Musharaxiinta maalinkii labaad uu shirkoodu gelayo ayaa kala ah Xasan Cali Kheyre, Xasan Sheekh Maxamuud Shariif Sheekh Axmed, Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Cabduqaadir Cosoble Cali, Daahir Maxamuud Geelle, Musstaf Sheekh Cali Dhuxulow, Cabdikariin Xuseen Guuleed, Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo xubno kale, waxaana lagu wadaa in Isniinta berri ah ay war-murtiyeed ka soo saaraan shirkooda.
← Maxay ka wada-hadleen Cabdikariin Guuleed iyo guddoomiye Cabdi Xaashi?
Maxaabiis ka baxsatay xabsi ku yaalla dalka Lubnaan oo ku dhintay shil gaari →